သည် အင်တာနေရှင်နယ် (ဒိုတာ၂) - ဝီကီပီးဒီးယား
သည် အင်တာနေရှင်နယ် (ဒိုတာ၂)
The International (အတိုကောက် TI) ဟုခေါ်သော အမည်သည် Valve ကော်ပိုရေးရှင်းမှ ဦးစီးကျင်းပသော အီလက်ထရောနစ် အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည့် ဒိုတာ ၂၏ ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲဖြစ်မြောက်ရန်အတွက် ဒိုတာ ၂ ကြေးစားအဆင့်မြင့် ကစားသမားများပါဝင်သော အသင်း ၁၆ သင်းကို ဖိတ်ခေါ်၍ ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြိုင်ပွဲအခမ်းအနားကို ဂျာမနီနိုင်ငံ ကိုလိုဂျင်မြို့တွင် ကျင်းပသော Gamescom (ကမ္ဘာ့ဂိမ်းပြပွဲ ပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနား) တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၇ ရက်မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုပြိုင်ပွဲသည် ဒိုတာ ၂ ပေါ်ပြီး ခဏအကြာတွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းဆုကြေးငွေ ၁.၆ သန်း(အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ဗိုလ်စွဲသည့်အသင်းအနေဖြင့် ဆုငွေ ၁ သန်းကို ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် အင်တာနေရှင်နယ် ပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်၃၁ ရက်မှ စက်တင်ဘာ၂ ရက်နေ့အထိ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်၊ ဆီအက်တယ်ရှိ ဘီနာရိုအာ ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဆုကြေးငွေမှာ ယခင်နှစ်အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ တတိယ အကြိမ်မြောက် အင်တာနေရှင်နယ်ကို ထိုနေရာမှာပင် ကျင်းပခဲ့ပြီး Valve ကော်ပိုရေးရင်းအနေဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ဒစ်ဂျစ်တယ် လက်မှတ်အဖြစ် Compendium ဟုခေါ်သော စာအုပ်များကို ရောင်းချခဲ့ပြီး ဂိမ်းကစားသူများက ဝယ်ယူရကာ ရောင်းရငွေများမှ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဆုကြေးတွင် ဖြည့်သွင်းသည့် အစီအစဉ် စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၇ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိကျင်းပခဲ့ပြီး ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၂.၈ သန်းရရှိခဲ့ပြီး စာအုပ်ရောင်းရငွေ ဒေါ်လာ ၁.၂ သန်းကို ဆုကြေးထဲတွင် ထည့်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ စတုတ္ထအကြိမ် အင်တာနေရှင်နယ်ပွဲအား ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဂျူလိုင် ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိကျင်းခဲ့ပြီး Compendium စာအုပ်ရောင်းချငွေ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၀.၉ သန်း ရရှိကာ ကမ္ဘာ့အီလက်ထရောနစ် ဂိမ်းပြိုင်ပွဲများ သမိုင်းတွင် ဆုကြေးအများဆုံးအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့သည်။ 
ငါးကြိမ်မြောက် ကျင်းပခဲ့သော လက်ရှိ အင်တာနေရှင်နယ်ပွဲကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့မှ ၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းရရှိခဲ့ကာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုထဲမှာ ဆုကြေးငွေအများဆုံးပေးအပ်သော ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ် စံချိန်တင် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သည်။
၁ ပြိုင်ပွဲ၏ သမိုင်းကြောင်း
၂ မီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
၂၀၁၁ Gamescom တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပနေသော အင်တာနေရှင်နယ် ပြိုင်ပွဲ
Valve ဂိမ်းကော်ပိုရေးရှင်းက ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အင်တာနေရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပရန်အတွက် ၂၀၁၁ ဩဂုတ်လတွင် ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး အသင်း ၁၆သင်းကို ထိုပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်ပင် ဒိုတာ ၂ ဂိမ်းအား တရားဝင်လူသိရှင်ကြား ဘာသာလေးမျိုးဖြင့် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ ဂျာမန် နှင့် ရုရှဘာသာစကားများ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲအား Valve မှပင် အဓိက ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး ပတမဆုမှာ ဒေါ်လာ ၁သန်းခန့်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲအတွက် စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများကို Nvidia မှပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ထိုပြိုင်ပွဲအား ဂျာမနီနိုင်ငံ ကိုလိုဂျင်တွင် ကျင်းပသော Gamescom တွင် ဩဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲအား အုပ်စုအဆင့်မှ စတင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး အုပ်စု ဗိုလ်လေးဖွဲ့သာ ဆီမီးဖိုင်နယ် (အင်တာနေရှင်နယ်ပွဲ၏ အခေါ်အဝေါ်အရ Winner's bracket) တက်ခွင့်ရသည်။ ထို့နောက် ကျန်သည့်အဖွဲ့များထဲမှ ရှုံးသည့်အဖွဲ့ လေးဖွဲ့မှာ Loser's bracket သို့ ဆင်းရသည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်ပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲတွင် ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ Natus Vincere အသင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ EHOME အသင်တို့ ယှဉ်ပြိုင်ဆော့ကစားခဲ့ပြီး Natus Vincere အသင်းသည် လေးပွဲဆော့ကစား သုံးပွဲနိုင်ဖြင့် EHOME အသင်းအား အနိုင်ယူခဲ့သည်။  ပထမဆုအဖြစ် ဒေါ်လာ ၁ သန်း၊ EHOME အသင်းမှ ဒုတိယဆုအဖြစ် ဒေါ်လာ နှစ်သိန်းခွဲနှင့် ကျန်အသင်းရှစ်သင်းမှ ဒေါ်လာ သုံးသိန်းခွဲအား ခွဲဝေယူရသည်။
အင်တာနေရှင်နယ် ၂၀၁၁ ပြိုင်ပွဲများကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Free to Play အမည်ဖြင့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ထိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည် နာမည်ကြီး ကစားသမား သုံးဦး၏ ဘဝနောက်ခံများကို ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နေရာ အသင်းအမည် ဆုကြေးငွေ
ဝါရှင်တန် ဆီယက်တယ် ဘီနာရိုအာ ခန်းမတွင်ကျင်းပသော ၂၀၁၂ အင်တာနေရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲများသည် လာရောက်ကြည့်ရှုသူ အများအပြားရှိခဲ့သည်
၂၀၁၂ ခုနှစ် အင်တာနေရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲကိုတော့ မေလ ၂၀၁၂ တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ထိုပွဲအား လူ ၂၅၀၀ ဝင်ဆန့်သည့် ဆီယက်တယ် မှ ဘီနာရိုအာ ခန်းမတွင် ဩဂုတ်လ ၃၁ မှ စက်တင်ဘာ ၂ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည်။  စုစုပေါင်း ဆုကြေးငွေမှာ ဒေါ်လာ ၁.၆ သန်းဖြစ်ပြီး ပထမရရှိသောအသင်းမှာ ဒေါ်လာ ၁သန်းရရှီမည်ဖြစ်သည်။ ထိုပြိုင်ပွဲအား ဘာသာပေါင်းစုံဖြင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
ပထမအကြိမ်တွင် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည့် Natus Vincere အသင်းအား တရုတ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သော Invictus Gaming အသင်းမှ ဗိုလ်လုပွဲတွင် သုံးပွဲနိုင်ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ထိုပွဲအစီအစဉ်မှ ပါဝင်သော အသင်းများ၊ အသင်းသားများနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်းများ၊ အင်တာဗျူးများကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ 
3rd LGD Gaming $150,000
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Valve ကော်ပိုရေးရှင်းသည် အင်တာနေရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပမည်ဟု ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကြေငြာခဲ့ပြီး ယခင်နေရာဟောင်းမှာပင် ဩဂုတ် ၇ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ ကျင်းပရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ယခုအကြိမ်တွင် ကွဲလွဲမှုလေးများရှိလာသည်။ ယမန်နှစ် ချန်ပီယံအသင်းသည် ချန်ပီယံဖလားကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဖိတ်ခေါ်ခံရပြီး ကျန်သော အသင်း ၁၃ သင်းသည်လည်း ဖိတ်ခေါ်ခံရသော အသင်းများဖြစ်သည်။ ကျန်ဖိတ်ခေါ် မခံရသောအသင်းများမှာ ခြေစစ်ပွဲဆော့ကစားရပြီး တက်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ မေလ ၆ ရက်နေ့တွင် Compendium ဟု ခေါ်သော စာအုပ်များ ရောင်းချခဲ့ပြီးနောက် အင်တာနေရှင်နယ်ပွဲ၏ ဆုကြေးငွေများကို ထိုစာအုပ်ရောင်းချ၍ရသော ငွေများထဲမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား ဖြည့်ပြီး ပိုမိုများပြားလာစေခြင်းဖြစ်သည်။ စာအုပ်ရောင်းချရသော ငွေများသည် နဂိုမူလ ဆုကြေး၏ လေးပုံပုံ တစ်ပုံမျှ ရှိသည်။ ထိုစာအုပ်များ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သဖြင့် ဆုကြေးမှာလဲပိုပို မြင့်လာရာမှ အင်တာနေရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲမှာ ကမ္ဘာ့ဆုကြေးအများဆုံး အီလက်ထရွန်းနစ်အားကစား ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဆိုသည့် အမည်နာမကို ရရှိခဲ့သည်။ League of Legend ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ် ဂိမ်းပြိုင်ပွဲထက် ဆုကြေးဒေါ်လာ နှစ်သန်းပိုမိုရရှိကာ စံချိန်အသစ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။  ပထမဆုရှင်အတွက် ဆုကြေးမှာ ဒေါ်လာ ၂၈၇၄၃၈၁ ဖြစ်သည်။ KPCQ ၏ သတင်းကြေငြာသူ Daci Aitchison သည် ထိုပြိုင်ပွဲအတွက် ကျင်းပသူအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက် အစီအစဉ် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။အင်တာနေရှင်နယ် ၂၀၁၃ ပြိုင်ပွဲအား အွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသူအရေအတွက် အလွန်များပြားခဲ့ပြီး Twitch.tv မှ ကြည့်ရှုသည် တစ်သန်းကျော်ရှိခဲ့သည်။ 
အင်တာနေရှင်နယ် ၂၀၁၄ ပြိုင်ပွဲ
၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် Valve ကော်ပိုရေးရှင်းမှ အင်တာနေရှင်နယ် ၂၀၁၄ ကို ဂျူလိုင်လ ၁၈ ရက်မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်ဟု ကြေကြာခဲ့သည်။ ယခင် ကျင်းပနေကြနေရာမဟုတ်တော့ဘဲ လူပိုမိုဝင်ဆန့်သည့် ဆီယက်တယ်ရှိ KeyArena ခန်းမတွင်ဖြစ်သည်။ ယခင်နှစ်များနှင့်မတူ အုပ်ချုပ်သူများ၊ အထွေထွေ စီမံခန့်ခွဲသူများ၊ နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်သူများနှင့် အထူးဖိတ်ကြားဧည့်သည်များပါ ပါဝင်လာခဲ့သည်။၂၀၁၄ အင်တာနေရှင်နယ်တွင် တိုက်ရိုက်ဖိတ်ကြားသည့် အသင်း ၁၁ သင်းရှိခဲ့ပြီးနောက် ကျန်အသင်းများမှာ ဒေသဆိုင်ရာရှိ အတော်ဆုံးအသင်းများကို အချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်စေပြီး အနိုင်ရသည့် အသင်းအား ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို ဒေသတွင်း ရွေးချယ်ပွဲများကို မေလ ၁၂ ရက်မှ မေလ ၂၅ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုပြိုင်ပွဲအတွင်း ကြည့်ရှုရန်အတွက် ထိုင်ခုံလက်မှတ်များကို ဧပြီ၄ ရက် ၂၀၁၄ တွင် ရောင်းချခဲ့ပြီး တစ်နာရီအတွင်း ရောင်းကုန်သွားခဲ့သည်။ 
ဆုကြေးငွေ စုစုပေါင်းမှာ ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ အီလက်ထရွန်းနစ် အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် အများဆုံးဆုကြေးပေးနိုင်သည့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ် ဂျွန်လ၂၇တွင် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။. ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသွားသည့်အချိန်တွင် ပထမဆုကြေးမှာ ဒေါ်လာ ၁၀,၉၃၁,၁၀၃ ရရှိခဲ့ပြီး အနိုင်ရခဲ့သည့် အသင်းမှ ကစားသမားငါးယောက်သည် ဒေါ်လာ ငါးသန်းကျော်ကို ခွဲဝေယူခဲ့ကြသည်။ ယခု တစ်ကြိမ်တွင် အသင်းလိုက်သာမက ကစားသမားတစ်ယောက်စီတိုင်းကို ဝေဖန်ပိုင်းခြား၍ ဆုများပေးအပ်ခဲ့ပြီး ကစားသမား၈ ယောက်ကိုပါ ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ချန်ပီယံအသင်း Newbee တွင် ပါဝင်သောကစားသမားငါးယောက်လုံးသည် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး တစ်ဦးချင်းဆုကြေးငွေ ထပ်မံရရှိခဲ့သည်။ Chen Zhihao (ံHao ဟုလူသိများ) ထိုကစားသမားသည် ဆုကြေးငွေအများဆုံးရရှိသည့် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
1st Newbee $5,028,308
2nd Vici Gaming $1,475,699
3rd Evil Geniuses $1,038,455
4th Team DK $819,833
5/6th Cloud9 $655,866
LGD Gaming $655,866
7/8th Natus Vincere $519,227
Invictus Gaming $519,227
9/10th Team Liquid $49,190
Titan eSports $49,190
11/12th Mousesports $38,259
13/14th Team Empire $21,862
အင်တာနေရှင်နယ် ၂၀၁၅ ကို ကျင်းပမည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ကို ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်နေ့တွင် ကြေငြာခဲ့ပြီး အသင်း ၁၆ သင်းပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ဩဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့မှ ၈ ရက်နေ့အထိ ဆီယက်တယ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။  စုစုပေါင်းဆုကြေးငွေမှာ ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းဖြစ်ပြီး ထိုအထဲမှ ဒေါ်လာ ၁၆.၄ သန်းသည် ကစားသူများ လှူဒါန်းခြင်း၊ စာအုပ်ဝယ်ခြင်းတို့မှ ရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေသဆိုင်ရာ ယှဉ်ပြိုင်ရွေးချယ်ပွဲများတွင် အနိုင်ရအသင်းများ:
Region Winner Wildcard spot
Americas Complexity Gaming Team Archon[note ၂]
Europe Natus Vincere Vega Squadron
China EHOME CDEC Gaming
Southeast Asia MVP.Hot6ix MVP.Phoenix
1st Evil Geniuses $6,616,014
2nd CDEC Gaming $2,848,562
3rd LGD Gaming $2,205,338
4th Vici Gaming $1,562,114
5/6th Virtus Pro $1,182,011
7/8th Team Secret $818,316
MVP Phoenix $818,316
9-12th compLexity Gaming $218,217
Team Empire $218,217
Invictus Gaming $218,217
13-16th NewBee $54,554
Natus Vincere $54,554
အင်တာနေရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲများသည် ကနဦးအစတွင် အွန်လိုင်းပေါ်တွင်သာ ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ နှစ်စဉ် ကျင်းပလာခဲ့ရာမှ နောက်ပိုင်းတွင် အွန်လိုင်းဂိမ်း နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် အားကစားဆိုင်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ပြန်လည်တည်းဖြတ် ပြသခြင်းနှင့်၊ ဆောင်းပါးများရေးသားခြင်းတို့ကိုသာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဂျူလိုင်လ ၁၇ရက် ၂၀၁၄ တွင် Valve ကော်ပိုရေးရှင်းက အင်တာနေရှင်နယ် ၂၀၁၄ ကို ရုပ်သံအားကစားလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော ESPN ကွန်ယက်တွင် ပြသမည်ဟု ကြေငြာခဲ့ပြီး ESPN3 တွင်ပြသခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကိုတော့ ESPN2 လိုင်းတွင် ပြသခဲ့သည်။
↑ formerly Team Malaysia
↑ Played the qualifiers as North American Rejects v2
↑ "Largest Overall Prize Pools in eSports - Competitive Tournament Rankings :: e-Sports Earnings". esportsearnings.com.
↑ Phil Savage (July 21, 2015).
↑ "Largest Overall Prize Pools in eSports - eSports Tournament Rankings :: e-Sports Earnings". www.esportsearnings.com.
↑ Sullivan, Lucas (1 August 2011).
↑ Senior, Tom (10 August 2011).
↑ Miozzi, CJ (1 August 2011).
↑ Senior, Tom (17 August 2011).
↑ Schiller, Jen (23 August 2011).
↑ O'Connor, Alice (22 August 2011).
↑ Albert, Brian (March 21, 2014).
↑ Hafer, T.J. (11 May 2012).
↑ Schreier, Jason (4 September 2012).
↑ Senior, Tom (11 June 2012).
↑ Nunneley, Stephany (31 August 2012).
↑ Sarkar, Samit (4 September 2012).
↑ Lahti, Evan (16 November 2012).
↑ Dota Team (2013-04-26).
↑ Malloroy, Jordan (2013-05-07).
↑ Martin (May 16, 2013).
↑ O' Connor, Alice (9 August 2013).
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ Makuch, Eddie (13 August 2013).
↑ Williams, Katie (March 31, 2014).
↑ Gaston, Martin (April 1, 2014).
↑ Vas, Gergo (June 26, 2014).
↑ "Dota2takes the Top 8 Spots in Gaming Earnings".
↑ Moser, Cassidee (January 5, 2015).
↑ The International 2015 - Dota2Prize Pool Tracker
↑ ၂၈.၀ ၂၈.၁ "Dota2- The International 2015".
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သည်_အင်တာနေရှင်နယ်_(ဒိုတာ၂)&oldid=409639" မှ ရယူရန်
ဒိုတာ ၂ ပြိုင်ပွဲများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။